Microsoft Access yaona kuti Iyi Dhatabhesi iri mune Isingaenderane Nyika
musha Products DataNumen Access Repair Microsoft Access yaona kuti Iyi Dhatabhesi iri mune Isingaenderane Nyika
Ruzivo rwakadzama nezve "Microsoft Access yaona kuti Iyi Dhatabhesi iri mune Isingaenderane Nyika" Kanganiso
Paunenge uchishandisa Microsoft Access kuvhura yakashatiswa Yekuwana dhatabhesi faira, iwe unoona inotevera yekukanganisa meseji (kukanganisa 9505) kutanga:
Microsoft Access yakaona kuti dhatabhesi iyi iri mune zvisingaenderane nyika, uye ichaedza kudzoreredza dhatabhesi. Panguva iyi, kopi yekuchengetedza dhatabhesi ichaitwa uye zvinhu zvese zvakadzorerwa zvichaiswa mudhatabhesi nyowani. Kuwana kuchazovhura iyo nyowani dhatabhesi. Mazita ezvinhu zvisina kuburitswa zvinobudirira anozotorwa mutafura ye "Kudzorera Zvikanganiso".
Iwe unogona kubaya "OK" bhatani kuti rega Access igadzirise dhatabhesi. Kana Microsoft Office Access ikatadza kugadzirisa iyo yakaora dhatabhesi, icharatidza inotevera meseji yekukanganisa (kukanganisa 2317):
Iyo dhatabhesi 'xxx.mdb' haigone kugadziridzwa kana isiri yeMicrosoft Access dhatabhesi faira.
uko xxx.mdb izita reyakavanzika Yekuwana dhatabhesi.
zvinoreva kuti Microsoft Access yakaedza nepese painogona asi zvakadaro haigone kugadzirisa iyo faira.
Kanganiso iyi inoreva kuti Access Jet injini inogona kucherechedza zvimiro zvekutanga uye tsananguro dzakakosha dhatabhesi re MDB zvinobudirira, asi tsvaga kusawirirana mutsananguro yetafura kana data repatafura.
Microsoft Access ichaedza kugadzirisa dhatabhesi uye kugadzirisa kusapindirana. Kana tsananguro dzetafura dzakakosha kudhesiki rese dzisingakwanise kugadziridzwa, icharatidza zvakataurwa pamusoro apa "Dhatabhesi 'xxx.mdb' haigone kugadziridzwa kana harisi faira reData reMicrosoft Access." kukanganisa uye kubvisa basa rakavhurika.
Semuenzaniso yakashata MDB faira inokonzeresa iko kukanganisa. mydb_5.mdb
Iyo faira yakagadziriswa ne DataNumen Access Repair: dzakavanzika.mdb